Daahir Rayaale oo gaashanka ku dhuftay go’aanka Guddiga fulinta UDUB shalay ku doorteen Musharraxa Xisbiga | Berberanews.com
Home WARARKA Daahir Rayaale oo gaashanka ku dhuftay go’aanka Guddiga fulinta UDUB shalay ku...
Daahir Rayaale oo gaashanka ku dhuftay go’aanka Guddiga fulinta UDUB shalay ku doorteen Musharraxa Xisbiga
“Arrinkani arrin aan ogaa muu ahayn, arrin aan waafaqsanahayna maaha, waayo in qofku lacag Xisbiga ku iibsado maaha…” Guddoomiyaha UDUB .
Faransiiska-(Berberanews)-Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin ayaa ka hadlay khilaafka cusub ee soo kala dhex-galay xisbiga siyaasadda UDUB ee Somaliland, kaasoo ka dhashay doorashada musharraxa Madaxweynimo ee Xisbiga UDUD.
Daahir Rayaale ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo doorashada musharraxa Madaxweynenimo ee Xisbiga UDUB loogu doortay Jamaal Cali Xuseen. Maaddaama oo uu khilaaf ka dhashay musharraxnimadaas oo Xisbigu kala qaybsami karo, isla markaana waxa uu sheegay in waxa macno u samaynayaa yahay in go’aan midaysan oo UDUB ka soo baxa lagu xulan karo musharraxa Madaxweynenimo. Waxaanu sheegay in doorashada Musharraxnimada UDUB dib loo dooran doono doorashada golayayaasha deegaanka.
“Waan ka soo maqnaa dalka in muddo ah, Shirka golaha dhexe in la qabto ayey ahayd, taana waxaan u xil-saaray Guddoomiye ku-xigeenkayga waana la qabtay, waxa yimi fikir ah in Musharraxa la doorto doorashada ka hor, waxaan idhi haddii la isku raacayo waxba kamaan qabin in, laakiin warka aan maqlay maalmihii u dambeeyey waxaan sameeyey E-mail baan u diray ku-xigeenkayga aan ugu sheegayaayo talada haddii la isku khilaafsan yahay in Xisbigu burburo oo laba kooxood noqdo suuragal maaha ee waa la joojinayaa doorashada musharraxnimada, ee waa la joojinayaa musharraxnimada, doorashada golayaasha deegaanka ka dib baanaynu qaban doonnaa ta musharraxa.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga UDUB Daahir Rayaale Kaahin oo manta waraysi siiyey Laanta Af-Soomaaliga Idaacadda VOA.
Md. Rayaale oo hadalkiisa siiw ataa waxa uu yidhi; “Wax la isku oggol yahay oo aan khilaaf ka dhicin inay ku dhammaato ayaan jecelahay ee dib halloo dhigo oo ha la ila sugo kol haddii khilaaf jiro, farriintaas baan u diray shalay. Nasiib-darro-se may dhicin ee waxaan saaka maqlay inuu Ku-xigeenku qolo shir ugu qabtay Huteel Crown musharraxa gacanta halloo taago, qolodii kalena ay Xaruntii Xisbiga fadhiisteen. Runtii arrinkaasi waxaan u arkaa mid Xisbiga UDUB looga bartay waxaan ahayn, waayo? Khilaaf ma jiri jirin ee wax lagu heshiiyey ayuun bay wax ku dhammaan jireen.”
Mar uu Rayaale ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey inaan lagala tashan Musharraxa la doortay iyo in kale waxa uu yidhi; “Run ahaantii la igama talo-galen ee in la iga talo-galiyo ayey ahayd, haddii uu khilaaf yimina inuu ila soo xidhiidho ayey ahayd, ilamana soo xidhiidhin, inaan e-mail u dirana xidhiidh la’aantaas baa u sabab ahayn run ahaantii.”
Daahir Rayaale oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey qaabka ay ugu talagaleen in loo doorto Musharraxa jagada Madaxweynaha, waxa uu yidhi; “Arrinkani arrin aan ogaa muu ahayn, arrin aan waafaqsanahayna maaha, waayo in qofku lacag Xisbiga ku iibsado maaha, Xisbiga dadweynaha ayaa leh, maaha in qof la yidhaahdo lacag keen oo Xisbiga iibso, wax Xisbigayaga ku cusub baan u arkaa. Waxaan qabaa in lagu dhammeeyo waxa lagu heshiiyey, ninka la magacaabay iyo ka laga tagay midna aniga macno iima samaynayo, ee go’aanka Xisbiga UDUB ka soo baxay ma yahay mid la isku waafaqsan yahay ayaa muhiim ah.”
“Hore ugama tirsanaan jirin Jamaal UDUB, laakiin waa nin Muwaaddin ah oo xaq u leh inuu tartamo, si fiican baannu isu naqaannaa inankaas, waa Wiil dhalinyaro ah oo wax xumaan ah oo naga dhexeeyaa jirin.” Sidaa ayuu ku jawaabay Guddoomiyaha UDUB Daahir Rayaale Kaahin oo la weydiiyey aqoonta uu u leeyahay Musharrax Jamaal Cali Xuseen.
Jamaal Cali oo muddo dheer la soo shaqeeyay bangiga City Bank ayaa shalay waxaa musharraxa Xisbiga UDUB u doortay aqlabiyadda Guddiga fulinta ee xisbigu UDUB, balse doorashadiisa waxaa ka horyimid xubno kale oo iyaguna ka tirsan xisbiga UDUB, waxayna taasi keentay in xisbigu uu laba garab u kala jabo.
Previous articleWar Degdega: Xukuumadda Somaliland oo soo bandhigtay magacyada gacan-ku-dhiiglayaasha Fuliyay dilkii foosha xumaa ee Seemaal
Next articleWAXANNU KU WAR-GELINAYNAA DAWLADDA SOMALILAND IN HADII AAY DIFAACI WAYDO MAGACA SANAAG IN DADKA REER SANAAG AAY KU QASBAN YIHIIN IN AAY DIFAACAAN MAGACOODA WAX KASTA OO AAY KU QAADATO.